Big City Small World (Series3Episode 1 - A Burglary) - Myanmar Network
Posted by Myanmar Network Forum Moderator3 on July 2, 2013 at 15:04 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Series3Episode 1 - A Burglary (အတွဲ (၃) အပိုင်း (၁) ဖောက်ထွင်းမှုတစ်ခု)
အတွဲ၃ရဲ့ အစကတော့ သတင်းဆိုးနဲ့စတင်ခဲ့ပါတယ်။ တိုနီ၏ကော်ဖီဆိုင် ဖောက်ထွင်းခံလိုက်ရတယ်။ ဟုတ်ရဲ့လား?
Series3Episode 1 - A Burglary ( < အသံဖိုင် download ရယူရန် ဝဲဖက်မှ link ကိုနှိပ်ပါ)
Harry (still outside): Let’s just nip into the café for breakfast ...:
အင်း . . . ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ပုံမှန်လိုပါပဲ။
ဟိုင်းသူငယ်ချင်းတို့။ အလုပ်မသွားခင် မနက်စာ ၀င်စားလိုက်ဦးမလို့ပဲ။ . . . အဲ . . ဘာဖြစ်နေတာလဲ။
ဘာ။ မင်းတို့ရူးနေလား။ ကြည့်စမ်း . . . ခွက်တွေအကုန်လုံးကွဲနေတာပဲ။
အေး ဟုတ်ပါရဲ့။ နင်ပြောတာက . . .
ဟိုင်းသူငယ်ချင်းတို့။ ဘာဖြစ်နေတာလဲ။ အမှိုက်ပုံးတွေ ဘာဖြစ်နေတာလဲ။
ဟုတ်ပါရဲ့ . . .
ငါ ညဖက် ကော်ဖီဆိုင်ထဲမှာပိုက်ဆံသိမ်းထားလေ့မရှိတော့ ပြဿနာမရှိပါဘူး။
အင်း ဟို စပါယ်ရှယ် ငါးတွေတော့ရှိတယ်။
ဘုရားရေ။ ဘာလဲ။ အဲဒါဘာလဲ။
ဘာလဲ . . .
ဘယ်လိုဖြစ်လို့ . . .
ကြောင်တစ်ကောင် . . .
Tony: That explains the fish . . .
ဟေးသူငယ်ချင်းတို့။ အိုး . . . ဟယ်လို . .ပူစီ . . ဒါဒီကော်ဖီဆိုင်ရဲ့ ကြောင်အသစ်လား။
Permalink Reply by Ratan Biswas on July 5, 2013 at 14:25
Permalink Reply by sikedeveechan on July 8, 2013 at 23:57